Sida loo sameeyo qorshe ganacsi | vfxAlert official blog
Sida loo sameeyo qorshe ganacsi
In kasta oo xaqiiqda ah in qorshe la'aan aadan ka ganacsan karin ganacsatada sameeya. Sidoo kale, newbie ma arko farqiga u dhexeeya qorshaha ganacsiga iyo xeerarka istiraatiijiyadda ganacsiga. Waxaan isku dayi doonaa inaan markale kaa qancino muhiimada qorshaynta ganacsiga.
Maxaa la sameeyaa kahor ganacsiga
Ganacsade kasta kahor intaanu bilaabin ganacsiga waa inuu lahaadaa afar dukumiinti horey loo qoray oo qaab elektiroonig ah ama daabacan:
Xeerarka istiraatiijiyadda ganacsiga;
Shuruudaha lagu furayo boos;
Xeerarka maaraynta lacagta;
Xeerarka istiraatiijiyadda ganacsiga - Shuruudaha Furan / Xiritaanka, waqtiga ganacsiga, waqtiga loo isticmaalay, hantida ganacsiga (labada lamaane, alaabta ceyriinka ah, keydka), waqtiga uu dhacayo iyo macluumaadka kale ee la xiriira macaamil ganacsi.
Shuruudaha furitaanka boos . Xaaladaha si gooni ah ayaa loogu qeexay CALL (kordhin) iyo PUT (hoos u dhac) xulashooyinka - waxaa lagugula talinayaa qaabka liiska hubinta. Haddii ugu yaraan hal xaalad la buuxiyo, ikhtiyaarka lama furi doono.
Xeerarka maaraynta lacagta - tilmaamaha xisaabinta mugga xulashada furan iyo ficillada khasaaraha.
Qorshaha ganacsiga - wuxuu ka jawaabayaa ugu badnaan su'aalaha "ka waran haddii .." habka ganacsiga. Meelaha badankood, qorshaha ganacsigu wuxuu ka dhigan yahay istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo buuxa ah : shuruudaha macaamil ganacsi, maareynta lacagta, iwm. Aragtidayada, tani maahan mid aad u sax ah oo "hal meel ku wada yaal" macluumaadka ma oggolaan doono in fiiro gaar ah loo yeesho qaybta qorshaha.
Maxaa ku jira qorshaha ganacsiga?
Waxyaabaha loo baahan yahay ee qorshe ganacsi kasta waxay ku qoran yihiin tusaalooyin. Ha iloobin in kuwani ay yihiin tusaalooyin kaliya, ganacsade kasta wuxuu noqon doonaa shaqsi ku saleysan istiraatiijiyadda, aragtidooda ku aaddan halista ugu badan iyo suuqa guud ahaan.
Ficillada xoog ku dhaca
Waxaa lagama maarmaan ah in si faahfaahsan loo sharaxo loona qaado talaabooyin hormaris ah haddii ay dhacdo xaalad xasaasi ah: koronto la'aan ama internet la'aan, software-ka oo cilad ku yimid, iwm.
Aasaaska aasaasiga ah haddii uu jiro xoog kufsi: marka lagu daro kombuyuutarka ugu weyn waa inuu noqdaa laptop-ka keydka ah, kiniin ama taleefan casri ah oo leh softiweerka lagama maarmaanka ah iyo 4 / 5G-modem, VPS-server, liiska ugu dhow ee dhibcaha Wi-Fi ee kuugu dhow si dhakhso leh ayuu uga gali karaa internetka.
Kordhinta faa'iidada iyo khasaaraha
Marka lagu daro xuduudaha maareynta lacagta, waxay go'aamisaa waxa lagu sameeyo qiyamka faa'iidooyinka kala duwan: weyn, dhexdhexaad, yar. Tallaabooyin gooni ah oo loogu talagalay dhowr ganacsi oo lumay oo isku xigta! Qeybtu waa shaqsi, waxay kuxirantahay qaabka ganacsiga iyo qiyamka halista ugu badan.
«Ka dib markii faa'iido laga helay $ 50 ama saddex macaamil ganacsi oo isku xigxigay oo guul leh iyo maqnaanshaha kuwa aan faa'iido lahayn, ma ganacsaneyno». Ogow $ 50 waa xaddidan, ee ma ahan Ujeeddo ay tahay in lagu gaaro qiime kasta. Faa'iido kasta oo HADAFKA ahi waxay aakhirka u horseeddaa luminta dhigaalka.
«Ka dib 5 luminta xirfado isku xigta ama luminta 20% nasashada lacagta ugu yaraan laba maalmood si loo falanqeeyo xaaladda»
«Haddii macaashku yahay 10% dhigaalka, maya ganacsi dambe toddobaadkan oo arag sida calaamadaha ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan » iwm.
Marka aadan ganacsadeyn karin
Shuruudo noocee ah ayay leeyihiin ganacsiga: habeen hurdo la'aan, xaalad jiran, niyad jab ama rajo aad u weyn, iwm.
Xaaladaha waa in had iyo jeer la ilaaliyo oo aan la isku dayin inaad naftaada khiyaanayso. Tani waxay u horseedi doontaa oo keliya khasaaro, shaqada maskaxdu way ka duwan tahay mid jireed - si joogto ah in looga shaqeeyo xadka aysan soo noqon doonin.
Shuruudaha xulashada istiraatiijiyad ganacsi
Markaad isticmaaleyso istiraatiijiyado badan oo ganacsi oo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah, qeex shuruudaha ay ku dabaqayaan.
«Haddii labadii maalmood ee ugu dambeysay uu suuqu socdo, istiraatiijiyad X ayaa la adeegsadaa, haddii dhinaca dhinaca (flat) uu yahay istiraatiijiyad Y»;
«Waqtiga furitaanka waxaa go'aamiya ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaar ikhtiyaar ah, ka dibna macaamilka ayaa la xakameynayaa iyadoo la raacayo istiraatiijiyadda Z».
Waa maxay macluumaadka iyo isha laga helayo falanqaynta suuqa.
Fiidka, sida ku xusan kalandarka dhaqaalaha, liiska wararka muhiimka ah ayaa la go'aamiyaa berri. Ikhtiyaarrada ma furna haddii uusan jirin wax dhicis ah waqtiga la sii daayo warka, iyo sidoo kale nus saac ka hor iyo ka dibba ».
«Xogta Mushaharka ee aan Beerta Ahayn ayaa la daabici doonaa berri - xulashooyinka ayaa ku furan oo keliya warkan».
«Dhammaan tirooyinka garaafka ee la helay waxaa hubiya oscillators iyo Analytics dibadda», iwm.
Hawlaha ganacsiga muddada gaaban iyo muddada dheer
Had iyo jeer xusuusnow sababta aad u bilowday ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah. Waxay ka caawineysaa in lagu laabto xaqiiqda (maxaa loo furayaa toban ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ah maalin marka la qorsheeyey 10-20% bishiiba mar hore la kasbaday) iyo in la helo xoog lagu sii wado waqtiyada guuldarada.
Hadafkeygu waa inaan kasbado 5% bishiiba kani maahan shaqada ugu weyn. Looma baahna in laga ganacsado dhammaan calaamadaha, oo waxaa la furi doonaa oo keliya xirfadaha ugu xoogga badan uguna muddada dheer ».
«Ganacsigu waa shaqada ugu weyn; waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah u kordhiso cabbirka dhigaalka iyo macaashka bil kasta 3-5% ».
Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaar ah ayaa aniga ii ah isha adrenaline. Waan fahamsanahay halista iyo dhigaalka lacagtan, taas oo aan ahayn wax laga xumaado in lumiyo ».
Kale oo aad dooratay
Tixraaca ama sharciga aad jeceshahay "ha furin jaantuska in ka badan saddex jeer maalintii," "ha ka ganacsanin marka roobku da'ayo subaxa", iwm Qor wax kasta oo kaa caawin doona inaad la jaanqaado ganacsiga, xitaa haddii ay tahay calaamadaha khuraafaadka. Ka ganacsigu waa shay adag wax kasta oo yarna way caawin karaan ama ka soo saari karaan xaalad caadi ah. Had iyo jeer ku hayso qorshahaaga ganacsi hortaada foom warqad ah. Had iyo jeerna raac adigoo ka fikiraya sida calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u shaqeeyaan.